Fraịdee, Nọvemba 6, 2015 Sunday, Jenụwarị 15, 2017 Douglas Karr
Ọ bụrụ n’ị nọ n’ahịa ahịa email, ị nwere ike ịnụ gbasara DMARC. DMARC na-anọchite anya nyocha nke Ozi ngalaba, Nkwupụta na Mmekọrịta. Maka ozi ndị ọzọ, m ga-akwado saịtị Agari na akwụkwọ DMARC na ibe ha na isiokwu ahụ. Dabere na ndị ọkachamara na 250ok, onye na-akwado email anyị, ebe a bụ uru nke DMARC: Na-agbaso ọrụ na nkọwa nke usoro nyocha email nke ọma na SPF na DKIM. Na-enyere gị aka
Enwere otutu nzuzu site na ndị ahịa na ndị ọkachamara IT mgbe a bịara n'ihe gbasara iziga ozi na ntinye igbe. Imirikiti ụlọ ọrụ kwenyere na ọ bụ usoro dị mfe ebe ị na-eziga email… ọ na-enweta ebe ọ kwesịrị ịdị. Ọ naghị arụ ọrụ ahụ - ndị na-ahụ maka ịntanetị nwere ọtụtụ ngwaọrụ ha nwere iji nyochaa isi iyi nke email ahụ ma kwado ya dị ka isi iyi ama ama
Anyị na ndị mmekọ anyị na-elele igbe mbata email anyị na 250ok ma na-enweta nnukwu nsonaazụ. Achọrọ m igwu na miri miri ka mwube nke email anyị ma chọta nnukwu ngwá ọrụ a na-akpọ nyocha ozi. Onye na-anwale ozi na-enye gị adreesị ozi-e pụrụ iche ị nwere ike izipu na akwụkwọ akụkọ gị wee nye gị nyocha ngwa ngwa nke email gị megide nyocha SPAM nkịtị site na nzacha junk Na
Wednesday, April 30, 2008 Fraịdee, June 19, 2015 Douglas Karr
Naanị m kwagara email nke ụlọ ọrụ m gaa na Ngwa Google. Ruo ugbu a, anyị hụrụ nnwere onwe ọ na-enye anyị n'anya n'ezie. Tupu anyị abanye na Google, anyị ga-etinyerịrị arịrịọ maka mgbanwe ọ bụla, mgbakwunye ndepụta, wdg. Ugbu a, anyị nwere ike ijikwa ya niile site na ntanetị dị mfe nke Google. Otú ọ dị, otu ihe ndọghachi azụ anyị chọpụtara bụ na ụfọdụ ozi email sitere na sistemụ anyị anaghị emere anyị ya. Emere m ụfọdụ ịgụ na Google
You nwetụla mgbe ị gara azu ebe ị na-idobe gị akara na a nkeji ole na ole mgbe e mesịrị gị nri idide na-arahụ? N’ikpeazụ, i buliri akara gị gaa ebe ọzọ, ọ bụghị ya? Gịnị ma ọ bụrụ na anyị tinye nke a na Phishing? Ikekwe, onye ọ bụla nke na-anata phishing email kwesịrị ịpị na njikọ ahụ wee banye ozi ọjọọ na nbanye ma ọ bụ Kaadị E Si Nweta. Ikekwe anyị ga-emerịrị ihe karịrị sava ha kpamkpam